Ukusetshenziswa kwe-AC-DC Ukushintsha Ukunikezwa Amandla Ekushintsheni Ukunikezwa kwamandla
Ukushintsha ukunikezwa kwamandla ukusetshenziswa kwezingxenye zokushintshwa kwe-elekthronikhi njengama-transistors, ishubhu lomphumela wenkundla, i-silicon elawulwa kabusha i-thyratron, njll., ngokusebenzisa isifunda sokulawula, amadivaysi e-electronic switch ahlala "evuliwe" futhi "avaliwe", enza i-electronic switching devic. .
Ukuhlukaniswa, ukubunjwa kanye nesimiso sokusebenza solar photovoltaic system
Amasistimu we-solar photovoltaic ahlukaniswe ikakhulukazi amasistimu okukhiqiza amandla e-off-grid photovoltaic kanye nezinhlelo zokuphehla amandla e-photovoltaic ezixhunywe kugridi. 1. Isistimu yokukhiqiza amandla e-off-grid photovoltaic ikakhulukazi yakhiwe izingxenye zamaseli elanga, izilawuli, namabhethri. Uma ufuna...
Iswishi yesigxobo esisodwa sokushintsha kokukhanyisa
Amaswishi e-bipolar asetshenziselwa ukushintsha kokukhanyisa futhi angasetshenziselwa nokushintsha amandla esokhethi. Kunqunywa ngokwezidingo, ukushintshwa kwesigxobo esisodwa kungalawula umugqa owodwa kuphela, futhi ukushintshwa kwezigxobo ezimbili kungalawula imigqa emibili ngokuhlukana. Ukushintsha kwesigxobo esisodwa konga uhhafu wevolumu uma kuqhathaniswa ...
Ulwazi oluncane lokushintsha ukunikezwa kwamandla
Ngokuthandwa kwemishini kagesi, ukushintshwa kwamandla kagesi kusetshenziswa kabanzi empilweni yethu yansuku zonke, futhi kuyindlela ebalulekile yokuphakelwa kwamandla. Ngemuva kwalokho umhleli uzokwethula ukushintshwa kwamandla kagesi kanye nezinkambu zawo zohlelo lokusebenza kuwe. Ngokuthuthuka okusheshayo kwe-electronic technol...
Isaziso Somkhawulo Wamandla Kazwelonke
Customer Dear Mhlawumbe uye waqaphela ukuthi inqubomgomo yakamuva “yokulawulwa okubili kokusetshenziswa kwamandla” kahulumeni waseShayina ibe nomthelela othile emandleni okukhiqiza ezinkampani ezithile ezikhiqizayo, futhi ukulethwa kwama-oda kwezinye izimboni kufanele kubambezeleke. Ngaphezu kwalokho...
Ulwazi oluyisisekelo kanye nomsebenzi wokuphakelwa kukagesi wokushintsha ujantshi
Njengohlobo lwemishini yokuguqula amandla kanye nemishini, ukunikezwa kwamandla kaloliwe kungabonakala empilweni yethu yansuku zonke. Njengoba wonke umuntu azi, abantu abaningi banokuqonda okuncane kakhulu kolwazi lwayo oluyisisekelo nemisebenzi. Lapha, abantu bazokuthatha ukuthi ufunde i-bas...
Izindlela ezinhlanu zokuvikela ngokumelene nokuhlinzwa. Awuzukuyihlola?
Kwaziwa kahle ukuthi imikhiqizo ye-elekthronikhi ivamise ukuhlangana nokudlula kwamandla kagesi okungalindelekile kanye nokwenyuka okusetshenziswayo, okuholela ekulimaleni kwemikhiqizo kagesi. Umonakalo ubangelwa amadivaysi e-semiconductor emikhiqizweni ye-elekthronikhi (okuhlanganisa ama-diode, ama-transistors, i-SCR nama-circuits ahlanganisiwe) ashiswa ...
Wazi kangakanani ngama-inverters e-sine wave?
Umsebenzi we-Inverter OUTPUT: ngemva kokuvula i-“IVT SWITCH” yephaneli yangaphambili, isiguquli sizoguqula amandla amanje aqondile ebhethri abe yi-pure sinusoidal alternating current, okuyi-OUTPUT nge-“AC OUTPUT” yephaneli yangemuva. Automatic voltage stabilizer func...
Ungayithuthukisa Kanjani Inkinga Yezinga Lokushisa Elidlulele Ukunyuka Kokushintsha Isiguquli Sokuphakela Amandla
Enqubweni yangempela yokufaka isicelo, ukukhuphuka kwezinga lokushisa ngokweqile kuvame ukwenzeka kushubhu ye-MOS yesiguquli samandla kanye nomklamo we-transformer ngokwawo. Namuhla sizoqala kulezi zici ezimbili ukubona ukuthi singaxazulula kanjani ngempumelelo ukukhuphuka kwezinga lokushisa kwe-switching power supply transformer. Ikhwalithi ephezulu...
Ishaja yesilawuli seSolar, ukunikezwa kwamandla okuphuma kabili, I-Inverter yamandla 5000w, I-Inverter yamandla, Ukunikezwa kwamandla okuguquguqukayo, I-Solar Power Converter,